Soo dejisan Desktop Sidebar 1.05.116 beta – Vessoft
Desktop ka galeeysid – software ah oo waxtar leh taas oo ka kooban tiro Widgets iyo informers kala duwan si ay u soo bandhigaan macluumaadka ee ku saabsan desktop ah. The codsiyada ku yaalla software ka mid ah: guddi ka mid ah fariimaha deg dega ah iyo soo bandhigga waxqabadka nidaamka, saacad, kaalandhar, qoraalo, qorsheeye iwm Desktop ka galeeysid ka kooban guddi si loo hubiyo email iyo dhirta news kala duwan iyo cimilada ee internet ah. Software ayaa ku siinayaan shaqada la ciyaartoyda audio kala duwan oo dhegaysi ka raaxo badan si music. Sidoo kale Desktop ka galeeysid enabels si ay u dejiyaan daahfurnaanta iyo bedesho interface adigoo isticmaalaya haragoodu kala duwan.
Quick helitaanka email
Support for ciyaartoy dhowr ah
Display ee waxqabadka nidaamka
Joogitaanka haragoodu kala duwan
Soo dejisan Desktop Sidebar
Faallo ku saabsan Desktop Sidebar
Desktop Sidebar Xirfadaha la xiriira
Tool in uu soo bandhigo waxqabadka nidaamka iyo in la qorsheeyo desktop-ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto goobaha kala duwan computer.
Quick oo ku haboon helitaanka codsiyada iyo fayl. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u fududeeyaan ay ku daray agabka hordhigo oo ogolaanaya in la ballaariyo fursadaha ay isku xidha daro ah.
set ee qaybaha oo lagama maarmaan u ah hawlgalada codsiga software iyo web ku salaysan naqshadaha .net ah. software The taageera luqadaha barnaamijyada kala duwan.
MemTest – adeeg yar oo lagu tijaabiyo waxqabadka RAM, taas oo xaqiijineysa in RAM uu awood u leeyahay inuu duubo oo akhristo xogta.
software The si aad u aragto iyo maarayn xogta ku saabsan telefoonada Sony Ericsson iyo aaladaha ku salaysan nidaamka hawlgalka Android.